HPC001 Person Counter - China HPC001 Person Counter Supplier,Factory - Highlight
1.5 manga mirefy efijery LCD Display
1-5 metatra \_ 'lavitra
Olona HPC001 Counter dia tsotra infrered olona mifanohitra amin'ny tatitra tsotra tabilao. Olona manohitra manana LCD lamba mba hampisehoana ny tahirin-kevitra. Olona manohitra dia Powered by vatoaratra.
Ny olona manisa ny rafitra dia marina, azo antoka, mora ny hametraka, ambany fikarakarana, ary tena takatry. maro mpaninjara, trano famakiam-boky, tranombakoka, sy ny orinasa hafa no mandray soa avy amin'ny maro ireo rafitra manome tombontsoa. Saika misy karazana raharaham-barotra dia afaka mandray soa avy amin'ny tahirin-kevitra ny olona Counting rafitra manome.
Mpaninjara dia mampiasa ny tranombarotra olona mba hamaritana varotra amin'ny mpanjifa sy ny tampon'isan'ny mpanjifa ratios fotoana fifamoivoizana avy amin'ny isan'ora, isan'andro, isan-kerinandro, fomba fijery isam-bolana.
Trano famakiam-boky dia misafidy ny Visitor tranombarotra, satria manome tena takatry ny vahaolana ho an'ny fisiana ara-mandeha ho azy ny mpitsidika nandritra ny vanim-potoana sasany ny fotoana. Misy trano famakiam-boky ireo mihitsy aza ny olona mampiasa ny Wireless rafitra manisa sy ny rindrambaiko fonosana mba haharaka ny tampon'isan'ny ora for miasa tanjona.
Famaritana for HPC001
*Mitambatra ary fahazavana lanja (113*67*20MG,213h)
*Tsotra tahirin-kevitra retrieval by daty or by ora onanbsp;bnynbsp;month..etc
*Counter Management amin'ny alalan'ny Windows, tsy misy fanampiny rindrambaiko ilaina
*1.15 santimetatra manga efijery LCD miseho manao izany tsotra amin'ny ny maso
*anaty fahatsiarovana mahavita of mitahiry for up nyo 500 hours(Per ora isan- teny).
*Replaceable bateria niasa for ny tena Wireless fametrahana
*zava-dehibe manerana androm up ny 5-7 meters, tsara indrindra fampisehoana:&nbmetatra meters.
*Integrated fitomboan'ny napetraka na tsy voatery ABS plastika seza
*Setting &safidinao dia nahavita eo an-toerana by manan-danja board nyn'ny the mpanjifa by MediaWiki
*LCD efijery lafika-fahazavana miala-on / eny rahoviana ihany olona fidirana
*Power tamin'ny / eny fameram-potoana for ela bateria fiainana
*Lower bateria famantarana amin'ny LCD efijery
*roa fiteny for hetsika(Anglisy / Sinoa)
*LED indication for malemy&nbsfamantaranaal
*Traffic tahirin-kevitra amin'ny biraonao miseho for avy hatrany nanontany
*mahavita to ho nanao an- EAS Antenna tnynbsp;asa miaraka amin'ny systemCustomer Counter
Ny olona efa nampiasaina hanoherana ny karazana toeram-pivarotana.